Tababbarka Xariirka Bixiyaha - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Xarunta Tababbarka Bixiyaha > Tababbarka Xariirka Bixiyaha
Dhamaan qalabka aad ugu baahan tahay inaad ku daryeesho bukaankaaga.
Waxaan rabnaa inaan kuu fududeyno inaad daryeesho bukaanadaada. U adeegso boggaggan si aad u soo gudbiso oo aad u aragto codsiyada, u hesho macluumaadka bukaanka, oo aad ugu sii socoto waraaqahaaga.
Xariirka Macluumaadka Bukaanka ee HealthMAPS
CHPW waa Bogga macluumaadka bukaanka HealthMAPS kuu ogolaanayaa inaad gasho oo aad eegto sheegashada xubinta, hubiso u-qalmitaanka, aragtida iyo soo sheegidda ceymiska kale ee caafimaadka ee xubinta (OHI), iyo in ka badan.
CHPW ayaa hirgelinaysa Aqoonsi Muhiim ah dhammaan marinnada u jeedda bixiyaha, oo ay ku jiraan HealthMAPS. Tani waxay kor u qaadeysaa badbaadada iyo amniga bixiyaha CHPW iyo xogta xubinnimada.
OneHealthPort waxay horey u bixisay Xaqiijinta Dhinacyo Badan ee Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington.
Laga bilaabo Sebtember 27, 2021, waxaan kaa dalban doonaa inaad si toos ah u gasho OneHealthPort si aad u gasho bogga bixiyaha CaafimaadkaMAPS ee CHPW.
Laga bilaabo Sebtember 27, haddii aad isku daydo inaad abuurto koonto HealthMAPS cusub ama aad toos u gasho HealthMAPS, nidaamku wuxuu kuu wareejin doonaa OneHealthPort. Waxaad markaa u baahan doontaa inaad gasho OneHealthPort si aad u hesho HealthMAPS. Fadlan fiiri Su'aalaha HealthMAPS iyo qalabka Tababarka ee hoose si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Soo gal bogga 'HealthMAPS Portal'
Sida loo sameeyo akoon HealthMAPS
Waxaad awoodi kartaa iska diiwaangeli koontada HealthMAPS khadka tooska ah. Waxaad u baahan doontaa ogaadaan nambarkaaga (ID) Lambarkaaga Aqoonsiga Canshuurta Biilasha si sidaas loo yeelo.
Isdiiwaangeli HealthMAPS ➜
HealthMAPS Su'aalaha iyo Tababarka
Tilmaamaha Adeeg bixiyaha ee HealthMAPS
Gelitaanka Sheegashooyinka, Sheegashooyinka la Saxay, iyo Daawashada Ruqsadaha Hore iyo Gudbinta
Ma u Baahan Tahay Caawinaad Caafimaadka MAPS?
Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan OneHealthPort, oo ay ku jiraan sida loo diiwaangeliyo ama sida loo galo koontadaada, waxaad kala xiriiri kartaa OneHealthPort's Help Desk ee 1 (800) 973-4797, 24 saac maalintii, toddoba maalmood toddobaadkii.
Si lagaaga caawiyo su'aalaha guud, email u dir Kooxdayada Adeegga Macaamiisha.
Xariirka Maaraynta Daryeelka JIVA
Waxaan kaa door bidnay adiga gudbi oggolaansho hore iyada oo loo marayo Xariirka Maaraynta Daryeelka JIVA. Adoo adeegsanaya bogga, waad hubin kartaa u-qalmitaanka iyo heerka oggolaanshaha, daabacaadda waraaqaha oggolaanshaha, iyo codsiyada ku soo gudbi khadka tooska ah 24/7. JIVA ayaa ogolaaneysa howsha dedejinta oggolaansho iyo gudbin.
Soo gal JIVA Portal ➜
Sida loo abuuro koontada JIVA
Waxaad awoodi kartaa iska diiwaangeli koontada JIVA khadka tooska ah.
Isdiiwaangeli JIVA ➜
JIVA Su'aalaha iyo Tababarka
Su'aalaha Jirka ee JIVA
Tilmaamaha Isticmaalaha Xariirka JIVA
Fiidiyowyada Tababbarka Xariirka JIVA
Ma ubaahantahay caawimaad JIVA?
Wixii caawimaad ah arrimaha diiwaangelinta or caawimaad farsamo, emaylka Taageerada Xariirka.
Ku codso cashar tababar ah, emayl u dir Kooxdayada Xiriirka Bixiyaha. Mid ka mid ah Wakiilada Xiriirka Bixiyeyaasha ayaa kula soo xiriiri doona.
Isticmaal bogga OneHealthPort si aad u aragto oo aad is weydaarsato macluumaadka dhammaan ururada daryeelka caafimaadka Washington. Fadlan sii wad adeegsiga Xariirka Maareynta Daryeelka JIVA si aad u soo gudbiso oo aad u aragto codsiyada oggolaanshaha hore, codsiyada gudbinta, iyo ogeysiisyada bukaan -jiifka.
Laga bilaabo Sebtember 27, haddii aad isku daydo inaad abuurto koonto HealthMAPS cusub ama aad toos u gasho HealthMAPS, nidaamku wuxuu kuu wareejin doonaa OneHealthPort. Waxaad markaa u baahan doontaa inaad gasho OneHealthPort si aad u hesho HealthMAPS. Fadlan fiiri Su'aalaha HealthMAPS iyo qalabka Tababarka ee kor ku xusan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Soo gal bogga OneHealthPort ➜
Email u dir Kooxdayada Xiriirka Bixiyaha oo leh su'aalo ku saabsan boggayaga bixiyaha. Mid ka mid ah Wakiilada Xiriirka Bixiyeyaasha ayaa kula soo xiriiri doona.